Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: December 2011
ကိုလိုနီခေတ်ကလို ဂုတ်သွေး စုတ်တာမျိုး ရှောင်ရှားရန် ဒေါက်တာ အေးမောင်ပြော
ရခိုင်ပြည်နယ်က ထွက်သော သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ကို ရခိုင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် တစ်တစုံတရာ သုံးစွဲရန် အစီအစဉ် မရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာ အေးမောင်က ကိုလိုနီခေတ်ကလို ဂုတ်သွေးစုတ်တာမျိုးကို ရှောင်ရှားရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
ဒေါက်တာအေးမောင်က ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျောက်ဖြူမြို့ နာရီစင်ကွင်းတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်က ရရှိသော သဘာဝ ဓါတ်ငွေကို ခွဲဝေ သုံးစွဲခွင့် ရရှိရေး အတွက် တောင်းဆိုမည့် လူထု စည်းဝေးပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းစဉ် နိရဉ္စရာကို ထိုသို့ သူ့အမြင်ကို ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
" ကိုလိုနီခေတ်ကလို ဂုတ်သွေးစုပ်တာမျိုး၊ ဒေသ တစ်ခုက ထွက်တဲ့ ရှိရှိသမျှ သယံဇာတအားလုံးကို သိမ်းကျုံး ယူငင်သွားပြီး တခြားဒေသ ဖွံ့ဖြိုးမှု အတွက် လုပ်သွားတာမျိုး၊ အဲဒီ ဒေသမှာရှိတဲ့ သဘာဝ သယံဇာတပစ္စည်းကို စုပ်ပြီး တခြားဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်အောင် ယူသွားတာမျိုးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မှန်းထားတဲ့ ပြည်ထောင်စု သွေးစည်းညီညွတ်မှုနဲ့ ချစ်ကြည်မှုဟာ အလှမ်းဝေး ဝေးသွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့ ရခိုင်ပြည်သူ လူထုကို ဖွံ့ဖြိုးမှုလမ်းကြောင်းကို တင်ပေးစေချင်ရင် ( ဒီစီမံကိန်းကို ဖျက်ဖျက်ဖို့မဟုတ်ဘူး) ဒီစီမံကိန်းက ရတဲ့ အကျိုး အမြတ်အပေါ်မှာ ရခိုင်ပြည် သူလည်း ရသင့် ရထိုက်တဲ့ အချိုးအစားကို မျှဝေပေးပါ။ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကို တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ် တနံ တလျှားမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားဒေသ အကုန်လုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လမ်းကြောင်းကို ရောက်ဖို့ လိုပါတယ်"ဟု ဒေါက်တာ အေးမောင်က ပြောသည်။
၎င်းပြင်သူက "သယံဇာတ တော်တော်များများကို ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင် တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ များပါတယ်။ အဲဒီတော့ တိုင်းရင်းသား ဒေသ တွေမှာ ရေကာတာကြီးတွေ ဆောက်မယ်။ အီလက်ထရောနစ် ပါဝါထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ ပရိုဂျက်ကြီးတွေ လုပ်မယ်။ ရလာတဲ့ ဓါတ်အားတွေကို ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော်နဲ့ စက်မှုဇုန်တွေ ရှိတဲ့ မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်းကိုဘဲ ယူယူသွားမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသား သွေးစည်း ညီညွတ်မှုဟာ အလှမ်းဝေး ဝေးသွားပါလိမ့်မယ်" ဟု ပြောသည်။
ကျောက်ဖြူမြို့တွင် နှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားသော လူထု စည်းဝေးပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီးလည်း သူက ယခုလို ပြောသည်။
" ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းတဲ့ တွေ့ဆုံပွဲ ဆွေးနွေးပွဲဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ ဒေသ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု ရှိအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ ကြိုးပမ်းရာမှာ ရခိုင်ပြည်သူလူထုက ဘယ်လောက်ထိ ပူးပေါင်း ပါဝင်မှု ရှိမလဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ညီအကိုအရင်းတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ပြည်နယ် ၇ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်း ၇ တိုင်းပေါ့။ တိုင်း ၇တိုင်းမှာ အများစုနေကြတဲ့ ဗမာ အမျိုးသားတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ လည်း ကျွန်တော်တို့ အပေါ်မှာ ကိုယ်ချင်းစာနာမှာပါ။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ် သတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေး တဲ့ အခါမှာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်။ ကျွန်တော်တို့ လူထုဆန္ဒကို ခံယူတဲ့အခါမှာ ဖြစ်ဖြစ်။ ကျွန်တော်တို့ တင်ပြတဲ့ အခါ မှာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်။ ပြည်ထောင်စုကြီး အတွင်းက ရသင့််ရထိုက်တာကို တောင်းဆိုတာ တင်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဆင့်ဆင့်တွေကလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် အောင်မြင်အောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည် မျှော်လင့်ထားပါတယ်" ဟု ပြောသည်။
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီ အမတ်များက အမျိုးသား လွှတ်တော်နှင့် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်က ထွက်သော သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့နှင့် ပတ်သက်ပြီး တစ်စုံတစ်ရာ သုံးစွဲရန် ရှိမရှိကို မေးမြန်းရာ လုံလောက်သော အဖြေကို မရရှိခဲ့သဖြင့် လူထု စည်းဝေးပွဲ ပြုလုပ်ပြီး လူထု သဘောထားကို နိုင်ငံတော် အစိုးရ သိရှိစေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ယခုလို လူထု စည်းဝေးပွဲ ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
" ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူ့လွတ်တော်၊ အမျိုးသားလွတ်တော် အမတ်တွေကလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်္ဘာလတုန်းက ဒီရွှေဂတ်စ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြည်သူ့လွတ်တော်မှာ မေးခွန်းတွေ မေးခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီ မေးခွန်းတွေ အပေါ်မှာ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ၀န်ကြီးတွေဖြေကြားတဲ့အခါမှာ လုံလောက်တဲ့ အဖြေတွေ မရရှိခဲ့ပါဘူး။ ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာ ရှိကြတဲ့ မြေပေါ်မြေအောက်၊ ရေပေါ်ရေအောက် သယံဇာတ တွေအပေါ်မှာ စီမံ ခန့်ခွဲမှုနဲ့ ပတ်သတ်လို့ နိုင်ငံတော်က သဘောထားတချို့ ပျော့ပျောင်းနိုင်ပါရဲ့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ် ချက်ပေါ့။ အဓိကတော့ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ဒေသ တခုခုကထွက်တဲ့ မြေပေါ် မြေအောက် သယံဇာတအပေါ်မှာ နိုင်ငံတော်က ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေမှာ ဘယ်လိုဘဲကန့်သတ်ထားပါစေ ပြည်နယ်တိုင်း ဒေကြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် တစုံတခု အတိုင်းအတာထိ ဒေသခံ တွေအပေါ်မှာ ခွဲဝေပေးရမယ် ရာခိုင် နှုန်း အချိုးစားတခုကို နိုင်ငံတော်ကလည်း အသိမှတ်ပြု စဉ်းစားနိုင်အောင်ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်လည်း ပါပါ တယ်။ ပါတီမူဝါဒတွေကိုလည်း ပြည်သူကို ချပြနိုင်အောင်ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်လည်း ပါပါတယ်" ဟု ပြောသည်။
ရခိုင်တိုင်ရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီ၏ လူထု စည်းဝေးပွဲကို ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ယခုလ ၂၇ ရက် ရက်စွဲဖြင့် ခွင့်ပြုလိုက်ပြီး အဆို စည်းဝေးပွဲကို ဇန္န၀ါရီလ (၁) ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီက ၁၁ နာရီထိ ကျောက်ဖြူမြို့ နာရီစင်ကွင်းတွင် ပြုလုပ်ကြမည် ဖြစ်သည်။
စည်းဝေးပွဲသို့ လူပေါင်း ၅၀၀ ခန့်တက်ရောက်ခွင့် ပြုထားပြီး ဒေါက်တာ အေးမောင်၊ ကျောက်ဖြူပြည်သူ့ လွှတ်တော် အမတ် ဦးဘရှိန် အပါအ၀င် စုစုပေါင်း လူ (၆) ဦးက ဟောပြောကြမည် ဖြစ်သည်။
အင်နီဒိုရှားနိုင်ငံအချဲ (ACEH Region)မှာဆိုသူတို.ဒေသမှထွက်လာသည့်သဘာဝသယံဇာတ၏အကျိုးအမြတ်တွေကိုအချဲလူမျိုးများအတွက်(၇၀%)ရာခိုင်နှုန်းခွဲဝေပေးရမည်၊ဒီအချက်ဟာအချဲလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ.အင်ဒိုနီရှားအစိုးရတို.လက်မှတ်ထိုးခဲ့စဉ်ကတရားဝင်သဘောတူခဲ့ကြည်သည်၊အာဆီယံခေါင်းဆောင်များကလည်းဒိုင်လူကြီးအဖြစ်သက်သေလုပ်ပေးခဲ့သည်၊
သတင်း Campaign, VIEWS
တွေမှာတိုင်း၇င်းသားလက်နက်ကိုင်တွေတစုတစည်းတည်းဖြစ်သွားမှာကိုအလွန်စိုးရိမ်ခဲ့သည်။ စစ်ရေးအရတိုက်ခိုက်ရေးအင်အားတော်လှန်ရေးဘက်မှအင်နှင့်အားဖြင့်တပ်ပေါင်းစုတွေ၊ အထူးသဖြင့်KNUဗဟိုဌာနချုပ်ကြီးဖြစ်ခဲ့သော-မာနယ်ပုလောတွင်လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသား တွေအားလုံးတိုင်း၇င်းသားနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကြီးကျင်းပနေသည့်အချိန်မှာနအဖအစိုးရသည်-တဘက်သတ်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကိုချက်ခြင်းလုပ်ပြီးတိုင်း၇င်းသားတွေကိုခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကိုတိုင်ါ်၇င်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့
ပြလုပ်ဆောင်ပြီးယခုတဖန်ဥပါယ်တမျဉ်ဗျူဟာများဖြင့်မျှားခေါ်နေတာ ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်လွန်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်များကိုသုံသပ်ပြီး
သတင်း Articles, VIEWS
ဗမာထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များအချင်းချင်းအကြားအာဏာခွဲဝေမှုပွဲသာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ပျက်မည်၊Power Sharing among The Burmese Elite
(ဃ)၂၀၁၀ ခုနှစ်တုန်းကတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များနဲ.ဗမာခေါင်းဆောင်များ၊၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များပါဝင်လက်မှတ်ထိုးထောက်ခံထားသည့်ကလေးကြေညာစာတမ်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို.အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ်ကနှုတ်ပိတ်နေသည့်အချိန်မှာကြံ.ဖွတ်ခေါင်းဆာင်များ၊ကိုယ်စားလှယ်များ၊သိန်းစိန်းအစိုးရတို.ကပင်လုံကဲ့သို.သောညီလာခံခေါ်ပေးမည်ဟုထပ်မံပြောကြားပြီးတိုင်းရင်းသားများကိုစည်းရုံးထားသည်၊
(ဆ)ဒေါ်စုကြည်ဦးဆောင်သည့်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ်သည်ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းကြေညာစာတမ်း၊ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်းကိုချိုးဖောက်ပြီးသိန်းစိန်းတို.နဲ.အာဏာခွဲဝေရေးအတွက်စီအာပီပီနဲ.လမ်းခွဲခဲ့သလို ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုလည်လက်တွေ.မကျကြောင်း(ဖျက်သိမ်းသည့်သဘော)နဲ.ကြေညာခဲ့သည်၊
(ဇျ)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲချုပ်ဟာပါတီမှတ်ပုံတင်တင်ပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို.ကြိုးစားနေခြင်းသည် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရတိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်ပါတီများနဲ.စီအာပီပီခေါင်းဆောင်ကြီးများကိုမရိုသေမလေစားဘဲသစ္စာဖောက်သွားသလိုတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတိုင်းရင်းသားပါတီများနဲ.ပြိုင်ဖက်အဖြစ်နောက်လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ဝင်ပြိုင်မည်ဆိုရင်အာဏာရရေးအတွက်တိုင်းရင်းသားပါတီများကိုထပ်ပြီးစော်ကားမည့်သဘောရှိသည်၊ပါတီစုံဒီမိုကရေစနစ်ဟုအကြောင်းပြပြီးယှဉ်ပြိုင်လိ့မ္မည်၊
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကိုအကြမ်းနည်းဖြင့်အနှစ် ၆၀ ကျော်တိုင်အောင်မျိုးတုံးအောင်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်းအောင်မြင်မှုမရှိခဲ့သည့်အပြင်ပိုပြီးဆုံးရှုံလာသည်ကိုထောက်ရှူးပြီးအနုနည်းဖြင့်ဗျူဟာပြောင်းပြီးဗမာစစ်ခေါင်းဆောင်အုပ်စုနှင့်ဗမာအရပ်သားခေါင်းဆောင်တစ်ချို.ကြိုးစားလာသည်ဟုတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်သတင်းရပ်ကွက်ကသုံးသပ်နေကြသည်၊လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေအရ၊တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနဲ.တွေ.ဆုံဆွေးနွေးပြီး စစ်ကျွန်းဥပဒေအောက်ရောက်လာအောင်ကြိုးစားလျက်ရှိပြီးနိုင်ငံရေးအရရေရှည်အချိန်ဆွဲမှုသက်သက်ဖြစ်သည်ကိုလည်းသတင်းရပ်ကွက်ကဆိုပါသည်၊ပင်လုံကဲ့သို.သောညီလာခံလုပ်ပေးမည်ဆိုသည်ကိုလည်းမျှော်လင့်ချက်ပေးထားရုံသက်သက်သာဖြစ်ပြီးညီလာခံဖြစ်လာရင်တောင်မှလူအများစုမဲဆန္ဒနဲ.တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးကိုလျစ်လျှူးရှူခံရမည်ဟုကိုလည်းသုံးသပ်ကြသည်၊တိုင်းရင်းသားများကိုလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်စွန်.လွှတ်အောင်အနုနည်း၊အကြမ်းနည်းဖြင့်ကြိုးစားပြီးဥပဒေအောက်ရောက်လာပြီရင်အများစုမဲဆန္ဒနဲ.အခွင့်အရေးကိုဝိုင်းပယ်မည်ဟုသိရှိရပါသည်၊ဗမာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာနိုင်ငံတော်အလဲထဲမှာကြယ်တစ်လုံးသာထည့်ထားသည့်အဓိပ္ပါယ်ဟာဗမာပြည်မှာလူမျိုးတစ်မျိုးသာရှိကြောင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီးအဲဒီအလံထွက်လာကတည်ကပင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအနေနဲ.ဗမာစစ်အစိုးရကိုတပ်ပေါင်းစုဖြင့်ဝိုင်းချသင့်ဖြစ်ကြောင်းဆိုသည်၊လက်ရှိဗမာစစ်အစိုးရဟာလွှတ်တော်အထဲမှာရော၊လွှတ်တော်ပြင်ပမှာပါတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကိုစစ်ရေးအရ၊နိုင်ငံရေးအရဘက်ပေါင်းစုံကနေတိတ်တဆိတ်သတ်ဖြတ်လျက်ရှိကြောင်းသုံးသပ်နေကြပါသည်၊
သတင်း ပ, အမြင်များ
ရဟန်းတော်တစ်ပါးဟာအဓိကပါရာဇိကလေပါးကိုကျူးလွန်ခြင်းမရှိဘဲလူဝတ်လဲခွင့်မရှိဟုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတော်မူသည်၊ပါရာဇိကလေပါးကိုကျူးလွန်ခဲ့တာတောင်မှကိုယ်တိုင်ဝန်မခံလျှင်လည်းလုံးဝလူဝတ်လဲခွင့်မရှိကြောင်းဝိနည်းတရားတော်မှာဟောကြားတော်မူလေသည်၊ပါရာဇိကလေပါးဆိုတာဘာလဲ၊ ၁၊လူသတ်ခြင်း၊ ၂၊သူများပစ္စည်းခိုးယူခြင်း၊ ၃၊မေထုန်းတရားကျင့်ကြံခြင်း(မိန်းမ၊အခြောက်၊နှစ်ဖက်ချွန်းသူများနဲ..လိင်ဆက်ဆံခြင်း) နှင့် ၄၊ဈာန်မဂ်ဖိုလ်တရားကိုမိမိမသိမမြင်ဘဲသိမြင်သယောင်တင်စားဟောပြောခြင်းကိုဆိုလိုသည်၊
ရဟန်းတော်များနဲ.ပတ်သက်သည့်သိက္ခာပုဒ်တရားတော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလွဲပြီးဘယ်သူဘယ်ဝါ(ဘယ်ကောင်း၊ဘယ်မင်း)မှထပ်ပြီးပညတ်ပိုင်ခွင့်၊ပညတ်ပြီးသာသိက္ခာပုဒ်တွေကိုထုတ်နှုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ၊ ပါဠိဘာသာအရ၊ အပညတ္တံနပညာပေတဗ္ဗံ၊ပညတ္တံဝါနသမုဇ္ဖျိတဗ္ဗံ၊သိက္ခာပဒပညတ္တံနာမဗုဒ္ဓါနံဝိသယော၊နအညေသံ၊ သိက္ခာပုဒ်ပြဌာန်းခြင်းသည်၊ပြဌာန်းအပ်ခြင်းမလုပ်သေးသည့်သိက္ခာပုဒ်တွေကိုထပ်ပြီးပြဌာန်းခြင်းမလုပ်အပ်ရ၊ပြဌာန်းပြီးသားသိက္ခာပုဒ်တွေကိုလည်းတည်ဖြတ်မလုပ်အပ်၊သိက္ခာပုဒ်ပြဌာန်းခြင်းသည်မြတ်စွာဘုရားအရာသာဖြစ်ပြီးအခြားသူများပြဌာန်းခွင့်မရှိပါဟုဟောကြားတော်မူသည်၊
ယနေ.အချိန်အခါမှာလွန်ခဲ့သောဖဆပလ၊မဆလ၊နဝတ၊နအဖခေတ်တွေနဲ.မတူတာကကျုပ်တို.မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဟာအတူတကွယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးမူကိုပိုမိုအားကောင်းလာသောကြောင့်မိမိအာဏာတည်မြဲရေးအတွက်တိုင်းပြည်မပြိုကွဲရေး၊ပြည်ပရန်ကာကွယ်ရေး၊မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ရှင်သန်ရေးအကြောင်းပြချက်တွေနဲ.အာဏာဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်လိုသည့်လူမျိုးကြီးဝါဒီသမားများ၊အာဏာရှင်ကြီးများ၊တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်အုပ်စုများနှင့်လူလိမ်လူလဲကြီးအုပ်စုများကဆက်လက်ပြီးလှည့်ဖျားဖို.လမ်းဆုံးလမ်းခွရောက်နေပြီးဖြစ်သည်၊သခင်ဘဝနေမလား၊ကျွန်းဘဝနေမလားစသည့်သခင်မျိုးစိတ်ဓါတ်ကိုအကြောင်းပြပြီးဗမာလူမျိုးတွေကအခြားသောလူမျိုးတွေထက်မြင့်မြတ်သယောင်၊သာကီအနွယ်ဝင်သယောင်ယောင်စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးဖန်းတီးထားပြီးမောင်သန်းရွှေတို.အုပ်စုဘက်ကိုရပ်တည်လာစေပြီးလူသားအချင်းချင်းမုန်းတီးလာအောင်၊အနိုင်ကျင့်သတ်ဖြတ်လာအအောင်စသည့်မကောင်းစိတ်ဓါတ်ဖြင့်ဒုစရိုတ်ကြီးတွေကိုကျူးလွန်စေသည်၊ပြီးတော့၊တိုင်းပြည်မတည်ငြိမ်းဘူးဆိုပြီးအာဏာရှင်စစ်အုပ်စုကဆက်လက်အုပ်ချုပ်စေသည်၊ယင်ကဲ့သို.နှစ်ပေါင်း ၆၀ နီးပါးတိုင်အောင်လှည့်ဖြားလိမ်ညာခဲ့ငြားသော်လည်းယနေ.ခေတ်၏လူမှုကွန်ယက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းပန်းစနစ်တွေကြောင့်ဘယ်ဟာကမှန်တယ်၊ဘယ်ဟာမှားတယ်ဆိုတာကိုပြည်သူလူထုကသိရှိနာလည်နေကြပြီးဖြစ်သည်၊
Refugee - 'Life is so desperate' in Burma [CNN 12-01-2011]
တရုတ်လိုမဖတ်တတ်ရင် IE ကနေ Translate this page လုပ်ပြီးလေ့လာကြည့်ပါ၊
And the year when parting, memorable military way of life. Eastern pole, daishan, Chinese wolfberry, flower, sth Small island in the East China Sea Frontier "camel Bell", talk to lay down hard feelings. Is about to leave, taking the Zhoushan garrison retired Veterans Memorial in the form of military career last time. They came into the community, took the Fort, on ships, most special way to bid farewell to the army barracks, saying goodbye to the "second home". Through the camp put up with setbacks and hone, veterans is builtavaluable wealth of life, with soldiers, and they're going to createabetter future.
中国军网记者频道（叶丽君 符曦宇 记者朱达）“保重啊，战友！”骤然降温后的舟山阴雨绵绵，车站、码头弥漫着战友浓浓的离别深情。
送 别的战友相拥而泣，握手话别，互道珍重，倾诉难舍情怀。舟山警备区的退伍老兵在声声祝福和《送战友》的歌声中，洒泪挥别战友和第二故乡，恋恋不舍地踏上返 乡车船。离别之前，老兵们纷纷走进社区、走上炮台、走上舰艇，以最特殊的方式告别军营、告别第二故乡；朝夕相处的战友含泪为老兵们卸下伴随他们整个军营生 涯的领花、帽徽、肩章，戴上象征荣誉的大红花。数百名经过军营的摔打磨练的老兵，带着“老海岛”光荣传统、带着军营留给他们的优良作风，投身到建设家乡、 建设社会中去。
သတင်း Technique နည်းပညာ
by ခင် ရတနာ on Friday, December 2, 2011 at 1:35am
ဟီလာရီ စီးလေ့ရှိသည့် C-40B အထူးဂျက်လေယာဉ်
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန် အသုံးပြုတဲ့ လေယာဉ်တွေအနက် C-40B အမျိုးအစား ဘိုးရင်းဂျက်လေယာဉ်လဲ အပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။
C-40B အထူး ဂျက်လေယာဉ်ထဲမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဟီလာရီ
ဟီလာရီအတွက် အထူး သံတမန်လုံခြုံရေးအရာရှိ C-40B ဂျက်လေယာဉ်ဟာ အလျား ပေ ၁၁၀နဲ့ လေးလက်မရှိပီး အမြင့် ၄၁ပေနဲ့ ၂ လက်မ ရှိပါတယ်။ GE-CFM 56-7B27 အမျိုးအစား အင်ဂျင် ၂ လုံး တပ်ဆင်ထားပြီး ရေမိုင် ၄၆၀၀ ထိ ဆီမဖြည့်ဘဲ ဆက်တိုက် ပျံနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ မူလအသုံးပြုဖို့ ရည်ရွယ်ချက်က တိုက်ပွဲဝင်မဲ့ အမေရိကန် တပ်မှူးတွေ အမေရိကန်အစိုးရ ထိပ်တန်းအရာရှိတွေကို သွားလိုရာ ကမ္ဘာ့ဒေသအသီးသီးကို သက်တောင့်သက်သာ စိတ်ချလက်ချ သယ်ပို့ပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလေယာဉ်ဟာ အရပ်သုံး ဘိုးရင်းဂျက်လေယာဉ် ၇၃၇-၇၀၀ ကို စစ်သုံးဖြစ်အောင် အမေရိကန်လေတပ်အတွက် ပြုပြင်ထားတဲ့ အထူးဂျက်လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ C-40B ဂျက်လေယာဉ်ကို အမေရိကန် ထိပ်တန်းစစ်အရာရှိတွေ အမေရိကန်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်တွေအတွက် မိုးပျံရုံးခန်း ဖြစ်အောင် ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟီလာရီကလင်တန် စီးလာတဲ့ C-40B ဂျက်လေယာဉ်ပေါ်မှာ အချက်အလက်တွေ ဗီဒီယိုတွေ ပေးပို့ ဖမ်းယူနိုင်တဲ့ အမြန်နှုန်းကောင်းတဲ့ အင်တာနက်စနစ်တပ်ဆင်ထားသလို အသံနဲ့အချက်အလက် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကလဲ ရှင်းလင်းကြည်လင်ပြီး လုံခြုံမှုရှိတဲ့ စနစ်မျိုးတပ်ဆင်ထားပါတယ်။
ဒီလေယာဉ်ကို အသုံးပြုတဲ့ တိုက်ပွဲဝင် အမေရိကန်တပ်မှူးတွေအနေနဲ့ လေယာဉ်ပေါ်က အင်တာနက်စနစ်၊ LAN အင်တာနက် ကွန်ယက်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်၊ ကောင်းမွန်အောင် ပြုပြင်ထားတဲ့ တယ်လီဖုန်းစနစ်၊ ဂြိုလ်တုစနစ်တွေ၊ တီဗွီမော်နီတာတွေ၊ ဖက်စ်ပို့တဲ့စက်တွေ မိတ္တူကူးစက်တွေကိုသုံးပီး ကမ္ဘာ့ဘယ်ဒေသမှာမဆို စစ်ဆင်ရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဟီလာရီကလင်တန် စီးလာတဲ့ C-40B ဂျက်လေယာဉ်ကို ကိုယ့်ကိုကိုယ် ခုခံကာကွယ်ဖို့အတွက် လက်နက်တပ်ဆင်ဖို့ လုပ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
C-40B ဂျက်လေယာဉ်ရဲ့ လေယာဉ်မှူး ခေါင်းခန်းကိုကြည့်ရင်လဲ
-ဂျီပီအက်စ်စနစ်နဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ လေယာဉ်ပျံသန်းမှု ထိန်းချုပ်ရေး ကွန်ပြူတာစနစ်
-နောင် အနာဂတ်မှာသုံးမဲ့ ဂျြိလ်တုဆက်သွယ်ရေးစနစ်အခြေခံ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လေကြောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (GATM/FANS) နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ လေယာဉ်မောင်းစနစ်
-လေယာဉ်တွေ လေထဲပျံနေစဉ် တစင်းနဲ့တစင်း ပုံမှန်ဒေါင်လိုက်အမြင့်ကို လျှော့ချနိုင်တဲ့စနစ်
- လေကြောင်းသတိပေးချက်နဲ့ လေယာဉ်ချင်းမတိုက်မိအောင် ရှောင်နိုင်တဲ့စနစ်-၂
-Head-up Display (HUD) စနစ်လို့ခေါ်တဲ့ လေယာဉ်မှူးမျက်လုံးတည့်တည့်မြင်ကွင်းထဲမှာ ဒိုးယိုးပေါက်မြင်နေရတဲ့ ဒိုင်ခွက်စနစ်စတဲ့ ခေတ်မီ စနစ်တွေ တပ်ဆင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လေယာဉ်ထဲမှာလဲ လေယာဉ်အမှုထမ်းတွေ နားနေခန်း၊ အိပ်စင်တွေ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ဂုဏ်သရေရှိ ဧည့်သည်တော်တွေအတွက် အခန်း၊ စားဖိုခန်း နှစ်ခု၊ ရုံးခန်းစားပွဲတွေပါတဲ့ business class ထိုင်ခုံတွေ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
စစ်မြေပြင်မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံမျိုးကို သွားတဲ့အခါမှာသာ C-40B ဂျက်လေယာဉ်ကို အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်က သုံးပေမဲ့ ကဒတ်ဖီကို ဖမ်းမိဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ကာလ မြေပြင်ပစ်ခတ်မှုတွေ စိုးရိမ်ရတဲ့ လစ်ဗျားကို သွားတုံးကတော့ လုံခြုံရေးစနစ် ပိုကောင်းမွန်တဲ့ စစ်သုံး C-17 ဂလုပ်မာစတာ-၃ အမျိုးအစား ဧရာမ ဘိုးရင်းလေယာဉ်ကြီးနဲ့ သွားခဲ့ပါတယ်။
C-17 အထူးဂျက်လေယာဉ်ကြီး © Awie Badenhorst / Alamy
C-17 ဂလုပ်မာစတာ-၃ အမျိုးအစား ဘိုးရင်းလေယာဉ်ကတော့ ဧရာမဘိုးရင်းဂျက်လေယာဉ်ကြီးဖြစ်ပြီး စစ်သားတွေ အစားအစာတွေ ထောက်ပို့ပစ္စည်းတွေကို ကမ္ဘာအနှံ့ သယ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။
C-17 လေယာဉ်တွင်း မြင်ကွင်း-၁
အထုးသဖြင့် စစ်တလင်းဖြစ်နေတဲ့ လစ်ဗျားလိုနိုင်ငံမျိုးက ပစ်နိုင်တဲ့ မြေပြင်ကနေ ဝေဟင်ပစ် ဒုံးကျည်တွေ အသေးစားလက်နက်တွေရဲ့ ရန်ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် C-17 ဂျက်လေယာဉ်ဟာ ကိုယ်ထည်ကြီးမားပေမဲ့ လေထဲကို မတ်စောက်တဲ့ ဒီဂရီအနေအထားမျိုးနဲ့ အတက်အဆင်းလုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
C-17 ဂျက်လေယာဉ် အတက်အဆင်းလုပ်နေချိန်မှာ လေယာဉ်မောင်းတဲ့တာဝန်မရှိတဲ့ လေယာဉ်အမှုထမ်းတွေက လေယာဉ်ကို ပခုံးထမ်းဒုံးကျည်နဲ့ပစ်သလားဆိုတာ လေယာဉ် ပြတင်းပေါက်ကနေ ကြည့်နေရပါတယ်။ ပခုံးထမ်း ဒုံးကျည်နဲ့ ပစ်တာမြင်ပီဆိုတာနဲ့ လေယာဉ်မှူးတွေကနေ အပူဓါတ်ပါတဲ့ မီးကျည်သေနတ်ကို တည်ကြက်အနေနဲ့ ပစ်လွှတ်ပီး ကာကွယ်ရပါတယ်။
ဂျက်လေယာဉ် အင်ဂျင်ကထွက်တဲ့ မီးခိုးအပူဓါတ်ကို နောက်ယောင်ခံတက်လာတဲ့ မြေပြင်ကပစ်တဲ့ ပခုံးထမ်း ဒုံးကျည်ဟာ လေယာဉ်မှူးတွေ ပစ်ချလိုက်တဲ့ အပူဓါတ် မီးကျည်နောက်ကို ပစ်မှတ်ပြောင်း လိုက်သွားလေ့ရှိတဲ့အတွက် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး စီးတဲ့ လေယာဉ် ဒုံးကျည်ရန်က လွှတ်ကင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
C-17 လေယာဉ်တွင်း မြင်ကွင်း-၂
C-17 လေယာဉ်တွင်း မြင်ကွင်း-၃
ဟီလာရီကလင်တန်ထက် လုံခြုံရေး အဆင့်ဆင့် ထူပြောလှတဲ့ အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမားရဲ့ ၂၀၁၁ မေလ အင်္ဂလန်ခရီးစဉ်အကြောင်းက်ုလဲ ပြန်ပြောင်း ဖောက်သည်ချပါရစေ
အုိုဘားမားရဲ့ ၂၀၁၁ မေလ လန်ဒန် ဘုရင်မနန်းတော်ခရီး လုံခြုံရေး
ပြီးခဲ့တဲ့ မေလထဲကလဲ အုိုဘားမား ဇနီးမောင်နှံနဲ့အဖွဲ့ အင်္ဂလန်ကုို လာလည်တော့လဲ လုံခြုံရေးစနစ် များလွန်းလုို့ အင်္ဂလိပ်တွေတောင် ရင်သပ်ရှုမော ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။
လူ ၅၀၀ ကျော်လောက်ပါတဲ့ အုိုဘားမားအဖွဲ့ထဲမှာ အိမ်ဖြူတော် အရာရှိတွေ၊ သမ္မတကုို အရေးပေါ်ကုသဖို့ ဆရာဝန် ၆ ဦးပါ ဆေးအဖွဲ့၊ သမ္မတအတွက် စားဖုိုမှူးတွေ၊ လက်နက်ကုိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ၂၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ သမ္မတ ကုိုယ်ရံတော် စုံထောက်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
အင်္ဂလန်မှာ ခရီးလှည့်နေစဉ် အမေရိကန်ကနေ လေယာဉ်နဲ့သယ်လာတဲ့ စီးတော်ယာဉ် The Beast ကုို အုိုဘားမား စီးနင်းပါတယ်။ အုိုဘားမားကားကုို တခြားမော်တော်ယာဉ် အစီး ၂၀ ကခြံရံပီး ဒီကားတန်းကုိုမှ ရှေ့ပြေးမော်တော်ယာဉ်တွေက ဦးဆောင်ပါတယ်။
အုိုးဘားမားရဲ့ အခြံအရံတွေထဲမှာ ညူကလီယာ ဒုံးပျံတွေ ပစ်လွှတ်ဖုို့ လျို့ဝှက် ကုတ်နံပါတ်တွေပါတဲ့ လက်ဆွဲအိတ်ကုိုင် အရာရှိတဦးအပြင် အမေရိကန်နုိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ခံ ဌာနကြီး ၆ ခုရဲ့ ကုိုယ်စားလှယ်တွေလဲ ပါဝင်ပါတယ်။ အုိုဘားမား စီးတဲ့ Air Force One လေယာဉ်ကြီးဟာ အားကစားရုံတွေ ခွဲစိတ်ခန်းတွေပါဝင်တဲ့ ဧရာမ မုိုးပျံဟော်တယ်ကြီးအသွင် ဆောင်နေပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ညူကလီယာပေါက်ကွဲမြှုဖစ်ခဲ့ရင် ကာကွယ်ဖို့အတွက် ဓါတ်ရောင်ခြည် ကာကွယ်တဲ့စနစ်လဲ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
တည်ကြက် လေယာဉ်တစီးခြံရံထားပီး ဇိမ်ခံဟော်တယ်ကြီးအသွင် အုိုဘားမားစီးတော်မူတဲ့ Air Force One လေယာဉ်ကြီးဟာ တနာရီပျံသန်းတုိုိင်း ကုန်ကျစရိတ်က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂သိန်းနီးပါးရှိပါသတဲ့။ အိုဘားမားစီးမဲ့ မရင်းဝမ်း ရဟတ်ယာဉ်ကလဲ ဒုံးကျည်ရန်ကို ရှောင်လွဲနိုင်တဲ့ မီးကျည်တွေ တပ်ဆင်ထားပါတယ်
ဒုံးကျည်ကို တည်ကြက်လုပ် လမ်းလွဲခေါ်နိုင်တဲ့ မီးကျည်စနစ်
အိုဘားမားစီးမဲ့ မရင်းဝမ်း ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ တည်ကြက်ယာဉ်တွေအပါအ၀င် ယာဉ်မျိုးစုံ ၄၅ စီးကို အိုဘားမားသွားမဲ့ ခရီးစဉ်မတိုင်ခင် C-17 ဂျက်လေယာဉ်ကြိးနဲ့ ကြိုတင် ပို့ထားရပါတယ်။ အရင်ကဆိုရင် သတင်းစာသမားတွေ တီဗီံသမားတွေအတွက် ဘတ်စကား ၂ စီး၊ ရေဒါဖျက်တဲ့ယာဉ်တစီးနဲ့ SWAT ကွန်မင်ဒိုတွေအတွက် ကားတစီး ပါလေ့ရှိပါတယ်။ သမ္မတ အိုဘားမားရဲ့ လန်ဒန်ခရီးစဉ်အတွင်း သမ္မတမိန့်ခွန်းရေးပေးသူ ၄ ဦး ပါလာပါတယ်။
အုိုင်ယာလန်ကအပြန် လန်ဒန် ဘာကင်ကမ် ဘုရင်မနန်းတော်ကုို အုိုဘားဘား ညအိပ်လာရောက် လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာကင်ကမ် နန်းတော်ဆုိုတာ အင်္ဂလန် ပြည့်ရှင် အင်မတန် ချမ်းသာတဲ့ ဘုရင်မနန်းတော်မုို့ အစစ ဘယ်လောက် ပြည့်စုံမလဲ ဧည့်ဝတ်ကျေမလဲ မှန်းကြည့်နုိုင်ပါတယ်။ အုိုဘားမား ဇနီးမောင်နှံထားမဲ့ နန်းတော်အခန်းဆိုတာကလဲ နယ်လဆင်မန်ဒဲလားတုို့ အမေရိကန်သမတ ကနေဒီတုို့ လာတုံးက တည်းခုိုခဲ့တဲ့ သမုိုင်းဝင် အခန်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လောက်ဘဲ ဘုရင်မနန်းတော်အရာရှိတွေဘက်က ပြည့်စုံအောင် လုပ်ထားပါစေ…အမေရိကန် သမ္မတရဲ့ လုံခြုံရေးအရာရှိတွေအတွက်တော့ မပြည့်စုံဘူးလုို့ ယူဆပါတယ်။ ဒီမှာတင် အမေရိကန်ကနေ သမ္မတကုိုယ်ရံတော် လုံခြုံရေးစုံထောက်တွေ ယူလာတဲ့ ဗုံးဒဏ် ကာကွယ်နုိုင်တဲ့ မှန်နှစ်ထပ်ပုံစံ အလွှာတခုကုို အုိုဘားမားအိပ်မဲ့ အခန်းပြတင်းပေါက်တွေမှာ အပြင်က ထပ်တပ်ခွင့်ပေးရမယ်လုို့ တောင်းဆုိုလာလုို့ နန်းတော်အရာရှိ အံ့အားတသင့် ဖြစ်ကုန်ပါသတဲ့။
ဒီကြားထဲ သမ္မတအုိုဘားမားရဲ့ ကိုယ်ရံတော် ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့က နန်းတော်မြေအောက်ခန်းမှာ စစ်တပ်ပုံစံ အိပ်စင်တွေနဲ့နေရာယူ…ကုိုယ်ပုိုင် ဆက်သွယ်ရေး စက်ကိရိယာတွေတပ်ထားပါတယ်။
အုိုဘားမား လုံခြုံရေးစုံထောက်တွေ သေနတ်တွေ တကားကားနဲ့ အင်္ဂလန်ဘုရင်မ နန်းတော်ထဲမှာ သူတုို့ကုိုယ်ပုိုင်နန်းတော်အလား ပြေးလွှားနေလုိုက်ကြတာ ၂၄ ဆုိုတဲ့ တီဗွီဇာတ်လမ်းကြည့်နေရသလားထင်ရတယ်လုို့ မျက်မြင်သက်သေတွေက ပြောပါတယ်။ အုိုဘားမား ကုိုယ်ရံတော်တွေဟာ သမ္မတကုို အရေးပေါ် သွေးသွင်းနုိုင်ဖို့ ပစ္စည်းတွေအပါအ၀င် ဆေးခန်းအသေးစားလေးတခုကုို ဆေးရုံးသုံးစက်ကရိယာတွေနဲ့ နန်းတော်ထဲမှာ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
နောက်ဆုံး အုိုဘားမားကုို အင်္ဂလန်ဘုရင်မအတွက် သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ သောက်ရေသန့်ကုိုတောင် တုိုက်ခွင့်မပေးနုိုင်၊ သူတုို့အမေရိကန်က သယ်လာတဲ့ သမ္မတအုိုဘားမား သောက်နေကျ သောက်ရေသန့်ကုိုသာ တုိုက်မယ်လုို့ အုိုဘားမား ကုိုယ်ရံတော်ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိတွေပြောတော့ နန်းတွင်းအရာရှိတွေ အံ့သြသွားပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲလုို့မေးတော့ “ ကျွန်တော်တုို့သမ္မတ ရေပြောင်းရေလွဲမှာ ဗုိုက်နာတာမျိုး အဖြစ်မခံနုိုင်လုို့ပါ” လုို့ သမ္မတ ကုိုယ်ရံတော်တွေက ဖြေပါသတဲ့….။ ဘာပြောကောင်းမလဲ။ အင်္ဂလိပ်သတင်းစာတွေဆုိုတာ ဆွေ့ဆွေ့ခုန်သွားတာဘဲ။ အုိုဘားမားတို့ ဘုန်းကြီးလိုက်ပုံများ အင်္ဂလန်ဘုရင်မတောင် အရှုံးပေးရတယ်။ အင်္ဂလန်ဘုရင်မ သောက်တဲ့ရေတောင် အိုဘားမားကို မတိုက်နိုင်ဘူး...တဲ့။
ဘာပြောပြော အုိုဘားမားအတွက် ခုလို နန်းတော်လုံခြုံရေးလုပ်နေတာတွေဟာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်က လာသွားတဲ့ အမေရိကန်သမတ ဂျော့ဒတ်ဗလူဘွတ်လာတုံးကထက်စာရင် အများကြီးတော်ပါသေးတယ်လုို့ နန်းတော်သတင်းရပ်ကွက်က ပြောပါတယ်။
သမ္မတဘွတ်လာတုံးကများဆိုရင် သမ္မတလုံခြုံရေးအဖွဲ့က ဘာကင်ကမ် နန်းတော် ပြတင်းပေါက် ၇၆၀ လုံးကုို လဲပေးရမယ် တောင်းဆုိုခဲ့သလုို မစ္စတာဘွတ် စီးလာတဲ့ ရဟတ်ယာဉ်တွေကလဲ အလွန်ကြီးမားလွန်းတဲ့အတွက် နန်းတော်က သစ်ပင်တွေ ပန်းပင်တွေ လေဟပ်ပီး ပြားချပ်ကုန်လုို့ ဘုရင်မကြီးတောင် အတော်စိတ်ဆုိုးသွားပါသတဲ့။
ထူးခြားတာက အကြမ်းဘက်တုိုက်ခုိုက်မှုမျိုးစုံကနေ ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဆုိုတဲ့ အုိုဘားမားစီးလာတဲ့ The Beast စီးတော်ယာဉ် ကားကြီးဟာ အုိုင်ယာလန် ဒပ်ဗလင်မြို အမေရိကန်သံရုံးကအထွက် တံခါးဝမှာတင် ကားဗိုက်နဲ့ တခါးအထွက် အရှိန်တားတုံးနဲ့ တုိုက်ပီး ထုိုးရပ်သွားလုို့ အင်္ဂလိပ်စာနယ်ဇင်းတွေက အားမနာတမ်း လှောင်တာ ခံလုိုက်ရပါတယ်။
အုိုင်ယာလန် အမေရိကန်သံရုံးအထွက် တခါးဝမှာ ထုိုးရပ်သွားတဲ့ အုိုဘားမား ကားကြီး
အဆုိုးထဲက အကောင်းလုို့ပြောရရင်တော့ အင်္ဂလိပ်စာနယ်ဇင်းတွေ မသိလုိုက်တဲ့ အချက်က အုိုဘားမားစီးတဲ့ကားတန်းထဲမှာ The Beast နဲ့ ဆင်တူ တည်ကြက်ကားတွေလဲပါနေတာမုို့ ထုိုးရပ်သွားတဲ့ကားထဲမှာ အုိုဘားမားပါသလား ဘယ်ကားမှာ အုိုဘားမားပါသလဲဆုိုတာကုို အများပြည်သူတွ သံရုံးရှေ့က ကြည့်နေတဲ့ကြားက မျက်စေ့လည်သွားအောင် သမ္မတ ကုိုယ်ရံတော်အဖွဲ့က လုံခြုံရေးစနစ်ကစား သွားခဲ့ပါသတဲ့။
အမေရိကန်သမ္မတ လုံခြုံရေးကုို ဘယ်လောက်အလေးထားသလဲ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ဖုို့အတွက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် လန်ဒန် ဂျှီ-၂၀ ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲ အုိုဘားမား လာတုံးက ခေတ်ပြိုင် ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ လုံခြုံရေးစနစ်ကို ပြန်လည် ကူးယူ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ (ခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ်မရှိတော့တဲ့အတွက် အယ်ဒီတာအဖွဲ့ကို ခွင့်ပြုချက် မတောင်းနိုင်ခဲ့တာ တောင်းပန်ပါတယ်)
သမ္မတ အိုဘားမား ဒုံးကျည်၊ ဓါတုလက်နက်ခံနိုင်တဲ့ ယာဉ်စစီးပြီ
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား ဂျီ-၂၀ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတက်ရန် လန်ဒန်ရောက်နေစဉ် မည်သည့်အကြမ်းဖက်မှု မျိုးမျှ မဖြစ်ပွားစေရန်နှင့် သမ္မတကြီးအား မှဲ့တပေါက် မစွန်းစေရန် အိမ်ရှင် ဗြိတိသျှအစိုးရက တာဝန်ယူထားသည်။
အိုဘားမားနှင့်အတူ အရာရှိ (၅၀၀) ၊ အထူးထောက်လှမ်းရေး (၂၀၀) နှင့် ဆရာဝန်သူနာပြုအဖွဲ့ စသည်တို့ လိုက်ပါလာပြီး အိုဘားမားနှင့်အဖွဲ့ လန်ဒန်တွင် အသုံးပြုမည့် ယာဉ်မျိုးစုံ (၃၅) စီးကိုလည်း အမေရိကန်လေတပ် စီ-၁၇ လေယာဉ်ကြီးဖြင့် တပါတည်း သယ်လာသည်။
သမ္မတအိုဘားမားစီးနင်းသည့် Air Force One အထူးလေယာဉ် အင်္ဂလန်လေကြောင်းပိုင်နက်ဝင်လာသည်နှင့် RAF အင်္ဂလန်ဘုရင့်လေတပ် တိုက်လေယာဉ်အုပ်စုက အိုဘားမားလေယာဉ် စတင်းစတက် လေဆိပ်ဆင်းသည်ထိ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မည်။
အိုဘားမား၏ Air Force One သမ္မတသုံး အထူးလေယာဉ်မှာ ဘိုးရင်း (၇၄၇) အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး လေယာဉ်ပျံသန်းနေစဉ် သမ္မတအလုပ်လုပ်နိုင်အောင် လေယာဉ်အတွင်း စီမံထားသည်။ အားကစားလေ့ကျင့်ခန်း ၀ါသနာပါသူ အိုဘားမားအတွက် လေယာဉ်ထဲတွင် အားကစားလုပ်နိုင်ရန်လည်း စီစဉ်ထားသည်။
Air Force One အထူးလေယာဉ်ကို အီလက်ထရို မက်နက်တစ်လှိုင်းကာကွယ်သည့် လုံခြုံရေးပစ္စည်းများ တပ်ထားသည့်ပြင် လေယာဉ်တွင်း ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများမှာလည်း နျူကလီးယားလက်နက်တိုက်ခိုက်မှုမှ ထွက်လာသည့် ဓာတ်ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုကိုပါ ကာကွယ်နိုင်သည်ဆို၏။
အိုဘားမားရဲ့ စီးတော်ယာဉ်ကား အိုဘားမား၏ The Beast စီးတော်ယာဉ်
အမေရိကန်မှ လန်ဒန်သို့ တကူးတက သယ်လာသည့် အိုဘားမားစီးမည့် သမ္မတသုံးကားမှာ The Beast ဟု အမည်ပေးထားသည့် ဇိမ်ခံကားဒီးလက်အမျိုးအစားကားကြီးဖြစ်ပြီး ဂျိ်န်းစဘွန်းစီးသည့် ကားကဲ့သို့ Pump action ဖြင့် ပစ်နိုင်သည့် သေနတ်များ တပ်ဆင်ထားပြီး ယာဉ်မောင်းကို အမေရိကန် စီအိုင်အေ ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့က လေ့ကျင့်ပေးထားသည်။
အမေရိကန်သမ္မတစီးမည့် The Beast ကားကြီးသည် ယခုနှစ်ဆန်းကမှ ထုတ်လုပ်ပြီးစီးခဲ့သည့် ကားသစ်ကြီး ဖြစ်ပြီး အိုဘားမား ပထမဆုံး စတင်သုံးမည့် သမ္မတသုံးကားဖြစ်သည်။ ဒေါ်လာ (၃၀၀,၀၀၀) တန်သည်ဆို၏။ အဆိုပါကားကို အိုဘားမား လန်ဒန်မှာ ခေတ္တရှိနေစဉ် စီးနင်းရန် အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်သမ္မတစီးသည့် The Beast ကားဘော်ဒီကို (၅) လက်မထူသည့် တိုက်တေနီယမ်နှင့် ကြွေထည်ရော ထားသည့် သတ္တုစပ်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ထားပြီး မှန်များကိုလည်း ကျည်ကာမှန်များ တပ်ဆင်ထားသည်။ ဓာတုလက်နက်ဖြင့် တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ဒုံးကျည်နှင့် တိုက်ခိုက်ခြင်းတို့ကိုပင် ကာကွယ်နိုင်သည်ဟုဆိုသည်။
ကားတာယာများကလည်း မပေါက်နိုင်သည့် တာယာများဖြစ်ပြီး ကားထဲတွင် မျက်ရည်ယိုဗုံး၊ ညကြည့်ကင်မရာ အပြင် ဓာတုလက်နက်ဖြင့်တိုက်လာလျှင် လေသန့်အမြန် ထုတ်ပေးနိုင်မည့် အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်အိုး စသည့် ပစ္စည်းများလည်း တပ်ဆင်ထားသည်။
အိုဘားမားစီးတဲ့ AirForce One လေယာဉ်
အိုဘားမား စတင်းစတက် လေဆိပ်ရောက်ပြီး မိနစ်ပိုင်းအတွင်း အိုဘားမား၏ Marine One ခေါ် သမ္မတသုံး အထူးရဟတ်ယာဉ် (VH-3D) ဖြင့် လန်ဒန်မြို့လယ်သို့ သွားရောက်ခဲ့သည်။
မရင်းဝမ်း ရဟတ်ယာဉ်သည် အပူဓာတ်ကိုရှာပြီး ပစ်ခတ်သည့် ဒုံးကျည်များကို လမ်းလွှဲပေးနိုင်သည့် ရောင်ခြည်များ ပစ်လွှတ်နိုင်သည်။ အမေရိကန်သမ္မတလိုက်ပါသည့် မရင်းဝမ်း ရဟတ်ယာဉ်ကို သူ့ချည်းတစီးတည်း မပျံစေဘဲ တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်လာပါက မျက်စိလည်စေရန် အမျိုးအစားတူ အခြားရဟတ်ယာဉ်များနှင့် ရောနှောပျံသန်းလေ့ ရှိသည်။
ပျံသန်းသည့် အခါတွင်လည်း မြေပြင်မှဝေဟင်ပစ် ဒုံးကျည်များ ပစ်ခတ်မှု ခက်ခဲစေရန် အမြင့်ပေ (၃၀၀) မှ (၅၀၀) ကြားပျံသန်းလေ့ရှိပြီး သမ္မတအိုဘားမားစီးသည့် မရင်းဝမ်းရဟတ်ယာဉ် မြေပြင်မှထွက်သည်နှင့် မရင်းဝမ်းနှင့်အတူ ပုံတူအခြားတည်ကြက် ရဟတ်ယာဉ် (၃-၄) စီးက လမ်းတလျှောက် အထက်တက်လိုက် အောက်ဆင်းလိုက်လုပ် ပျံနေခြင်းဖြင့် မည်သည့် ရဟတ်ယာဉ်မှာ သမ္မတပါလာမှန်းမသိအောင် ပရိယာယ်ဆင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းကို Shell Game ဟု ခေါ်သည်။
စတင်းစတက်လေဆိပ်မှ လန်ဒန်မြို့လယ်ကောင်ရှိ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးအိမ်သို့ အိုဘားမားအား ပို့ဆောင်ပေးရန် ခရီးအတွက် ထိုမရင်းဝမ်းရဟတ်ယာဉ်ကို အမေရိကန်မှ သယ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
အိုဘားမားရဲ့ မရင်းဝမ်း အထူးရဟတ်ယာဉ်
လန်ဒန်၌ အိုဘားမားသွားလေရာ အထူးအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေး (၂၀၀) က လိုက်ပါစောင့်ကြပ်နေမည်ဖြစ်ပြီး အိုဘားမားကျန်းမာရေး ရုတ်တရက် ဖောက်လာလျှင် အရေးပေါ် သွေးသွင်းရန် သမ္မတ၏ အေဘီသွေးကို အသင့်ဆောင်ထားသည့် အမေရိကန်ဆရာဝန်များ၊ ခွဲစိတ်ကုဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုဆရာမများပါသည့် ဆေးအဖွဲ့လည်း ပါဝင်သည်။
အိုဘားမားစီးနင်းသည့် The Beast စီးတော်ယာဉ်ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အင်္ဂလန်မှ Specialist Protection Group နှင့် Diplomatic Protection Group မှ လုံခြုံရေးအရာရှိများက ကျည်ကာလင့်ရိုဘာ ကားများစီးပြီး စောင့်ရှောက်မည်။ အဆိုပါ လုံခြုံရေးအရာရှိများသည် (၉) မီလီမီတာ Glock ပစ္စတိုသေနတ်များ၊ MP5 ကာဘိုင်သေနတ်များ၊ G9 ရိုင်ဖယ်များ စသည်တို့ကို ကိုင်ဆောင်ထားမည်ဖြစ်သည်။
လန်ဒန်ရဲတပ်ဖွဲ့ ဗဟိုစစ်ဆင်ရေးဌာနခွဲ CO19 မှ လက်ဖြောင့်သေနတ်သမားများက အကြမ်းဖက်မည့် အလားအလာများကို ရှာဖွေနိုင်ရန် အိုဘားမားလာမည့် လမ်းတလျှာက် အဆောက်အဦခေါင်မိုးများပေါ်မှာ နေရာယူထားမည်။ အဆိုပါဌာနခွဲမှ ရဟတ်ယာဉ်များကလည်း အိုဘားမား၏ ကားတန်းကို ကောင်းကင်မှ ထက်ကြပ်မကွာ စောင့်ကြည့်နေပြီး အမေရိကန် သမ္မတ ကားတန်းလှုပ်ရှားသွားလာနေသည့် ဓာတ်ပုံများကို လန်ဒန် စကော့တလန်ယာဒ်အဖွဲ့ကြီး ထိန်းချုပ်ရေးဌာနသို့ ပို့ပေးမည်ဖြစ်သည်။